Tag: passbook apple pasipoti
Ini ndichangotanga kushandisa Passbook pane yangu iPhone pandakashanyira Starbucks. Kunyangwe ndichizvikudza neangu Starbucks Goridhe Kadhi, ndinofara kufara kudzikisa kukora kwechikwama changu nekadhi rimwe chete. Ini ndinongotambidza barista foni yangu uye ivo vanokwanisa kuongorora mibairo yangu kadhi ipapo ipapo! Ndichishandisa iyo Starbuck's app, ndinogona kurodha zvakare kadhi rangu zvakananga kubva kufoni yangu futi. Iyo Inotevera Webhu nguva pfupi yadarika yakaita posvo zvese